PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-01-08 - U-ANDILE NOTERRY OHLELWENI LWE-TV
U-ANDILE NOTERRY OHLELWENI LWE-TV
Ilanga langeSonto - 2017-01-08 - Izindaba - NONHLAKANIPHO SHINGA nonhlakaniphos@ilanganews.co.za
WETHULWE njengejaji lomncintiswano omusha obizwa nge-e! Africa Presenter Search, umlingisi osezakhele igama nasemazweni aphesheya kwezilwandle, uterry Pheto.
Le ntokazi ithole leli thuba lokusebenza nesiteshi okungesaphesheya kwezilwandle i-e! Entertainment ebesifuna umethuli wezinhlelo ozosisebenzela kodwa ezinze e-afrika.
Ngokusho kwesitatimende esikhishwe ngabe-e Entertainment, uterry uzojaja abayi-8 abangenele lo mncintiswano, aphinde abakhombise nokuthi bangenza kanjani ukuze baphumelele.
U-andile Ncube kuthiwa nguye ozoba ngumethuli walolu hlelo.
Kubikwa ukuthi sebekhethiwe abayi-8 abahlungelwe ukungenela lo mncintiswano kanti phakathi kwabo kukhona abethuli bezinhlelo asebezakhele igama kuleli udanine Naidoo, umosa Kaiser, u-abigail Visagie, usian Moss, u-ayanda Nhlapo, ukatleho Sinivasan, ujuan-martin Jordt nojessica Tims.
Lo mncintiswano kuthiwa uzoqoshelwa egoli lapho laba bethuli bezinhlelo bezobe behlala khona ndawonye. Bazobhekana namajaji baphinde banikwe imisebenzi eyehlukene okumele bayenze, kube noyedwa okhishwayo njalo ngesonto.
Lo mncintiswano uzoqala ukubonakala kwi-e! Entertainment ekuDSTV Channel 124 mhla lulunye kunhlolanja (February) ngelesi-20h55. Kuzobe kuqala ngqa ukuba lesi siteshi sifune abanekhono kuleli lizwe kanye nomethuli wezinhlelo ozozinza kuleli.
Ngokusho kwemanaging Director yakwanbc Universal Global Networks, eyengamele i-e! Entertainment, e-united Kingdom, ucolin Mcleod, leli yithuba elingandele bani elizonikwa umuntu oyedwa kuleli ukuba amele lesi siteshi ezwenikazi i-afrika.
“Leli kuzoba yithuba lokukhombisa umhlaba wonke ngezinto eziningi nemicimbi emikhulu ekhona ezwenikazi i-afrika kanti nalowo oyohamba nesicoco sokwethula lolu hlelo uzothola ithuba lokukhombisa ngekhono lakhe emhlabeni jikelele,” kusho yena esitatimendeni.
Phakathi kosaziwayo bakuleli abazobe belekelela uterry no-andile, kubalwa abasiki bengqephu udavid Tlale nogert-johan Coetzee, umrepha uproverb nobonang Matheba.
UZOKWETHULA uhlelo i-e! Africa Presenter Search u-andile Ncube kuthi umlingisi uterry Pheto abe yijaji.